Taageero loogu talagalay dadka naafada ah
Haddii aad naafo tahay, waxaad heli kartaa noocyo kala duwan oo taageero ah, si ay usii wanaagsadaanaan fursadahaaga suuqa seyladda shaqada. Taageeradaasi waxay noqon kartaa tusaale ahaan mid qalab ah, taageero mid shakhsiyeed ama tabaruc dhaqaale ahoo loogu talo galay shaqo-bixiyahaaga.
Haddii aad naafo qabto, oo uu karaankaaga shaqanimo aad u hooseeyo, waxaad heli kartaa caawimaad ah, inaad hesho shaqo ku habboon duruufahaaga. Caawimaadaas oo noqon karta, in goobta shaqada iyo hawlihii shaqada aad qaban lahayd laguu habeeyo, ama isla sidoo kale in saacadaha shaqada ee caadiga ahaa laguu bedelo. Si wadajir ah, ayaa adiga iyo cidda aad u shaqaysaba, u wada abuuraynaa duruufaha saxda ah kuwa ugu habboon. Waxaanu isla sidoo kale siin doonaa shaqo-bixiyahaaga gargaar dhaqaale.
Taageero mid Shakhsiyan ah
Waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo taageero shakhsi ahaaneed ah, oo khuseysa goobtaada shaqada ama haddii ay ahaan lahayd mid waxbarasho. Halkan waxaa ku qoran tusaale, qaar ka mid ah taageerrada:
Haddii aad u baahato caawimo hawlaha qaarkood, waxaad heli kartaa kaaliye shakhsiyeed. Annagoo siin doonaa shaqo-bixiyahaaga gargaar dhaqaale.
Haddii aad u baahan tahay taageero fahanka tacliinta ah, waxaad heli kartaa taageero aqoon ah, waase haddii aad dhigato mid ka mid ah waxbarashada aan soo jeedinno.
Shakhsi kaa taakuleeya ka hor iyo inta lagu guda jiro xilliga shaqaaleysiinta, oo loo yaqaano la talinta SIUS.
Shaqooyinka Samhall - ee kuwa u baahan taageero iyo hagid badan si loo kobciyo awooddaada shaqanimo.
Taageero marka aad shaqo raadineyso
Ma u baahan tahay taageero aad ku gasho suuqa seyladda shaqada ama aad ku xulato ama ku bedesho xirfad shaqo? Si wada jir ah ayaanu Annaga iyo adigaba, u qiimeyn doonaa taageerrada nooca aad u baahan tahay.
Halkan waxaa ku qoran tusaale, qaar ka mid ah taageerrada:
Taakuleyn gaar oo ah mid habboon, gaar ahaan marka aad shaqo raadineyso. Taakuleyntaasi oo ay bixiyaan ilaha gaarka ah ee nala shaqeeya ee heshiiska nala galay.
Taageeridda ka qaybqaadashada hawlaha aan qabanno, sida tarjumaanka dhagoollada.
Dariiq-tusin haddii ka wareegeyso Dugsi waxbarasho si aad u gasho nolol shaqo, sida ugu macquulsan.
Xannaano ku saleysan Shaqo nololeedka
Waxaanu leenahay shaqaale khibrad gaar ah u leh baxnaaninta shaqo nololeedka, kuwaasoo si wadajir ah fursadahaaga ku suuqa shaqada kusii wanaajin kara. Qaarkood ay yihiin milkiile shaqo, isla sidoo kalena ah shaqaale xirfado khaas u leh meelo kala duwan.
Tusaalooyin kuwa ku takhasusay
Takhaatiirta xirfadlayaasha ah iyo kuwa jir-dhiska
La-taliyaha dhagoolka, miyir-qabad , maqal la’aanta
Kuwa takhasusay daryeelka aragtida
Waxaanu sida wadajir ah isla meel dhigi doonnaa in aad u baahan tahay inaad la xiriirto mid ka mid ah kuwan iyo in kaleba.
Qalabka caawiya hawlaha nolol maalmeedka
Waxaad heli kartaa, kaalmo dhaqaale, oo kaa caawiya sidii aad ku heli lahayd, Qalab kaa caawin doona hawlaha nolol maalmeedka sida goobta shaqada. Shaqe-bixiyahaaguna wuxuu isla sidoo kale heli karaa, kaalmo dhaqaale oo loogu talagalay Qalab kaa caawin doona hawlaha nolol maalmeedka, ama qalabyada shaqada ama haddii goobtaada shaqada ay u baahan tahay in laguugu habeeyo.
Waxaad xaq u leedahay kaalmo dhaqaale, inta lagu gudo jiro xilliga shaqaaleysiinta gaar ahaan 12 bilood ee u horreeya. Haddii aad shaqeynaysay in ka badan 12 bilood, weli waxaad xaq u leedahay kaalmo dhaqaale, laakiin markaa waa inaad adiga iskaa ula soo xiriirtaa Hay'adda Khasnadda Caymiska.
Caawimaad Aaladda shaqada
Kaalmo dheeraad ah oo ku saabsan naafanimada